SAMOTALIS: SOCDAALKEYGII FINLAND IYO GUUSHA JAALIYADDA SOMALILAND IYO KAALINTA XISBIGA KULMIYE
SOCDAALKEYGII FINLAND IYO GUUSHA JAALIYADDA SOMALILAND IYO KAALINTA XISBIGA KULMIYE
Kulmiye Finland waa laan qaab dhismeedku u dhan yahay, leh maamul hufan iyo xubno firfircoon. Waxaana marag ka ahaa qabanqaabada iyo hab socod siinta shirweynha oo ku dhammaaday guul iyo af garad lagu qaybsaday hawlaha xisbiga ee xiligan doorashada loo diyaar garoobaayo. Waxa qorshaha oo laga soo abaabulay gudaha siday oo si hufan u sharaxay Xildhibaan Maxamed Axmed Xirsi Obama.
Waxa ii racday booqosho aan ku tegey xafiiska Jaaliyadda ee Helsinki oon kula kulmiye wax garad iyo odayada magaalada oon iska wareysanay hawlaha qaranka iyo xaaladaha bulsho, dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalku maraayo. Waxaanu taabanay isku duubnida iyo ka qayb qaadashada hawlaha qaranka ee horumarinta bulsho, maalgashiga iyo kaalinta ictiraaf doonka iyo danaha asxaabta ee badhitaarka xisbiyada. Waxaan isna la kulmay Xildhibaan reer Soomaliland ah oo ka tirsan Golaha Deegaanka Magaalada Vantaa ee ka tirsan Helsinki Xildhibaan Faysal Abdi oo si weyn noo soo dhoweeyey noogana waramay hawlo dhowr oo uu gacanta ku haya si leynaga caawo arrimo la xidhiidha horumarinta bulshadeena iyo maalgashi ganacsato reer Finland. Arrimahaas oonu kagala hawl geli doona guadaha Insha Allah.
Waxa Maamulaha Jaliyadda Mudane Xasan Cali Seddexle noo diyaariyey aniga iyo xildhibaanku inaanu la kulano Ha'ad weyn ee u qaabilsan dadka Disable ka ah, min dhagoole, curyaan, indhole, iyo kuwa dhimirka ah. Waxaanu uga xog waranay baahida loo qabo dalkeena oo ka soo kabanaaya dagaal iyo colaad iyo dhaqale xumo ay inaga hor joogto wax ka qabadka arrimahan. Waxaanu u sheegnay sida ictiraaf la'aantu nooga hor joogto horumarka dhinaca caafimaadka. Waxay noo sharaxeen inay qaab daladeed Somaliland u taakuliyaan, laakiin ay u baahan yihiin wada shaqayn gudaha ah iyo iskaashi Yurub ah. Waxaan balan qaaday inaan ku soo xidho ururo ka hawl gala U.K si loo helo mashruuc weyn oo EU ka ah.
Waxaan aad ugu mahadnaqayaa Jaaliyadda guud ahaan, gaar ahaan reer Kulmiye oo u hor kacayo Guddoomiye Axmed Wali Khaliif. Waxaan iyaga aanan iloobeyn Directorka Jaaliyadda Mudane Xasan Cali Seddexle iyo Xildhibaan Faysal Cabdi. Dhammaan reer Fainland mahadsanidin.